COVID-19: Sida Aan Bulshadeena Ugu Darno - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster COVID-19: Sida Aan Bulshadeena Ugu Darno - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
Caawinta Diiwaangelinta Caymiska
CVEID-19: Sida Aan Bulshadeena U Daryeesho
Waxaan ku bixinaynaa daryeel muuqaal fool-ka-fool ah, taleefanka, iyo qof ahaan iyadoo lagu saleynayo baahiyo caafimaad oo gaar ah:
jirran iyo kahortagga daryeelka qoyska
Daryeelka dhalmada kahor
Daryeelka carruurta iyo baaritaanyada carruurta iyo tallaalada
Maareynta cudurrada daba-dheeraada sida sonkorowga & dhiig karka
Isla maalintaas ama isla usbuucii booqashooyinka dabagalka ee daryeelka kahortagga qoyska iyo daryeelka xaalada caafimaad ee raagta
Daaweyn Daaweyn Daaweyn ah
Fadlan na soo ogeysii hadaad qandho, neefta oo ku qabato, ama qufac. Astaamaha kale ee suurtagalka ah ee COVID-19 ee ah in fiiro gaar ah la yeesho oo aan wax ka ogaano ayaa ah qadhqadhyo, gariir, murqo xanuun, dhadhan ama urin, madax xanuun, ama cuna xanuun.
MACLUUMAAD MUHIIM AH ACERCA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
Koorso badan oo ku saabsan luqado badan oo Coronavirus ah iyo warbixin laga helo Adeegyada Kaniisadda
Kheyraadka CDC ee Luqadaha Aan Ingiriisiga ahayn
[MULTILINGUAL VIDEO]: COVID-19: Sida loo ilaaliyo naftaada loona joojiyo fiditaanka fayraska
[MULTILINGUAL WEBSITE]: Macluumaadka Coronavirus ee loogu talagalay soogalootiga iyo qaxootiga
Ilkaha wuxuu u furan yahay nidaamka deg-degga ah, howlaha degdegga ah, iyo daryeelka ilkaha ee ka hortegi kara hawlgallada degdegga ah / degdegga ah, sida:
Kanaalka xididka ee xanuunka
Waxay wadataa qaadis si looga bogsado xanuunka ama looga hortago kanaalka xididka
Dib-u-sibisiinta taaj si looga hortago dhaqdhaqaaqa ilkaha oo sababi kara baahida loo qabo taaj cusub
Qaabsocodyada loo baahan yahay nadiifinta ilkaha ee loogu talagalay qalitaanka iyo qalliinka beddelka wadajirka ah
Xusuusin: Ma bixinno nadaafad joogto ah waqtigan.
Haddii aad leedahay ballan qof-ahaaneed oo loo qorsheeyay daryeelka degdegga ah, fadlan adigu iska imow.
Barnaamijkeena Ilkaha Caafimaadka Smiles Healthy waxaa lagu bixiyaa banaanka xaruntayada Water Street!
Booqashada Smiles Healthy waxay qoysaska siisaa fursad ay ku darsadaan booqashada ilkaha ee carruurtooda 5 sano jirta iyo wixii ka yar inta lagu guda jiro booqashada caafimaad. Booqashooyinka deg-degga ah, raaxada leh, iyo kuwa is-dhexgalka leh waxaa ka mid ah baaritaanka ilkaha, nadiifinta, iyo foloraydh varnish oo ay ku jiraan Nadaafadda Caafimaadka Ilkaha Dadweynaha. Wac 717-299-6371 si aad ballan uga samaysatid Smiles Healthy Smiles booqo ama aad ugu tagto teendhada dibedda haddii aad leedahay ballan caafimaad oo qoyskaaga ku yaal Xarunteena Biyaha.
Bixinta Balanta COVID-19 & Imtixaan
Haddii aad ma samayn leedahay caymis caafimaad, ma bixin doontid kharashka ballanta iyo baaritaanka COVID-19.
Waan furannahay Isniin - Jimco, 8 subaxnimo - 5 galabnimo, waxaana hada lagu darayaa saacado fiidki ah oo xarun walba ka duwan. Weydii wax ku saabsan saacadahaheena fiidnimo marka aad soo wacdid si aad ballan u qabsatid.
Waxaan leenahay ku meelgaar ah xidhnaa goobteenna Bright Side.
Fadlan soo wac 717-299-6371 si aad ballan uga qabato ballan qof-ahaaneed meel kale oo furan -or- si aad ballan uga sameysato ballanta fool ka fool ah ama taleefanka lala yeesho bixiye inta aad guriga joogtid.
Goobaha furan ee Lancaster waxaa ka mid ah:
> 625 S. Wadada Duke
> 304 N. Wadada Biyaha
> Xarunta Caafimaadka Dugsiga Dhexe ee Reynolds, 605 W. Walnut Street
Uurka, Caruurta, iyo CVEID-19: Farriin ka timid Bixiyeyaashayada
KAADHKA & COVID-19
Bixiyaha Xarunta Caafimaadka ee Lancaster, Cara Torres, waxay ka hadashaa uurka iyo coronavirus. Cara waxay ku takhasustay Caafimaadka Haweenka waxayna daryeeshaa haweenka uurka leh ee ku nool beesheena ~
CARRUURTA & COVID-19
Dr. Jennifer Brubaker, Xarunta Caafimaadka Caruurta ee Lancaster, waxay bixisaa xoogaa macluumaad ah, talooyin, iyo dib-u-xaqiijin ah markay tahay xagga carruurta & coronavirus ~
Khibrad Caafimaad Leh oo Ammaan ah
Waxaan sii wadi doonnaa daryeelka aan ku hayno qoyskeena, saaxiibbadeen, iyo deriskaaga ee leh astaamaha COVID-19, waxaanan abuurnay badbaado badbaado iyo badbaado leh oo khibrad leh oo ilaaliya:
Nadiifinta & jeermisyada goobaha daryeelka bukaanka ka dib isticmaal kasta
Furitaanka Xarunteenna Caafimaadka Dugsiga Dhexe ee Reynolds ee baaritaannada carruurta iyo tallaallada wanaagsan ee carruurta
U fidinta booqashooyinka daryeelka qoyska ee ka hortagga ah iyo ka-hortagga ee fiidiyoowga fool ka fool ah iyo taleefanka iyadoo lagu saleynayo baahiyo caafimaad oo gaar ah
Ma u baahan tahay caawimaad Codsashada Caymiska Caafimaadka?
Haddii aadan haysan caymis caafimaad, waxaan u joognaa inaan kaa caawinno inaad codsatid Gargaarka Caafimaadka (Medicaid), Qorshaha Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP), ama Caymiska Suuqa. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan ka jawaabno wixii su'aalo ah ee aad ka qabtid codsashada caymiska caafimaadka.
Call 717-299-6371 oo weydiiso in laguula xiriiro Shaqaalaha Bulshada.
Farmashiyaha Daawada Daawada
Farmasiiga Dukaamada Daawada ee ku yaal xaafadayada New Holland Avenue waa furan tahay. Fadlan xiro maaskaro oo 6 fuudh ka durug kuwa kugu xeeran marka aad farmashiyaha geleyso.
Farmasiiga Dukaamada Daawada ee South Duke Street meesha uu furan yahay. Si loo hubiyo in bukaannadu ay awood u yeeshaan masaafada bulsheed, goobtani waxay u oggolaan doontaa 1-2 bukaan oo keliya inay galaan farmashiyaha markiiba. Fadlan horay u wac warqadda daawada iyo lacagtaada.
Farmasiiga Daawada Daawada wuxuu sidoo kale bixiyaa bukaan jiif bilaash ah, dirid, iyo xannibaada dhinaca qaadashada daawada. Wac 717-208-3415 si loo qorsheeyo adeeggan bilaashka ah.
La xiriir Raadinta & Sida Is-Isu-Ahaanshaha ee Guri Weyn
Haddii aad iska tijaabisay COVID-19 - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster ayaa kuu soo wici doonta oo kaala hadli doonta waxa aad dareemayso iyo waxa aad samayn lahayd marka dambe. Waxay sidoo kale kaa caawin doonaan inaad la soo baxdo liiska saaxiibbada, qoyska, ama deriska aad xiriir dhow la lahayd ka hor inta aysan astaamahaagu billaaban si aannu u ogeysiinno inay u soo ifbaxday COVID-19. Tan waxaa loo yaqaan "Raadinta Xiriirka." Waan yeeli doonnaa ma u sheeg magacaaga ama macluumaadkaaga.
Haddii aad tijaabisay COVID-19 oo aad ku nooshahay guri weyn - Hadaad awoodo, isticmaal qol gooni ah iyo musqusha midda qoyskaaga inteeda kale. Haddii aad u baahan tahay inaad isticmaasho aag caadi ah sida jikada ama qolka fadhiga, xiro maaskaro, ka joog 6 fuud oo ka mid ah xubnaha qoyskaaga oo ka tirtir wax kasta oo aad taabato.
Haddii aad xiriir dhow la lahayd qof tijaabada ka helay COVID-19 - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster ayaa kuu soo wici doonta oo kaala hadli doonta waxa aad dareemayso iyo waxa aad samayn lahayd marka dambe.
Sida loo Xiro Maska Saarka
Kheyraadka Bulshada COVID-19
»Haddii adiga ama qof qoyskaaga ka tirsan u baahan yahay maaskaro maro ah, fadlan na soo ogeysii. Waxaan ku faraxsanahay inaan mid kaa siino.
»Tilmaanta kheyraadka ee Lancaster Waxay haysaa macluumaad ku saabsan bixinta biilasha, amaahda, adeegyada bulshada ee Lancaster iyo York, kaalmada utility, kaalmada cuntada, iyo in ka badan.
»United Way 2-1-1 - U garaac 211 ama (855) 567-5341 si aad ugula xiriirto ilo badan oo la heli karo ee Lancaster.
»Diiwaangalinta SDoL ee pre-K ee sanadka 2020-2021 way furantahay
»Caawinta Internetka - Haddii aad leedahay caruur guriga ku nool oo u baahan iskoolka Internetka iskuulka, ama qoyskaaga uusan laheyn internetka, waxaad uqalmi kartaa Caawinta Internetka.
»Adeegyada Rabshada Guriga: Haddii adiga ama qof aad taqaanid aad raadinaysaan qalalaase iyo adeegyada qorshaynta amniga, ka wac khadka 24ka saac ee (717) 299-1249 ama qoraalka SAFE illaa 61222.
»Caafimaadka Maskaxda ee Gobolka Lancaster County waxay martigelineysaa liis ay ku qoran yihiin kooxaha taageerada dalwaddii.
»Kheyraadka soo kabashada ee Virtual sidoo kale waa la heli karaa.
»Khadka Caawinta Taageerada & Tixraaca - Wac 1-855-284-2494 si aad ula xiriirto khad caawimaad leh shaqaale xirfad yaqaan iyo naxariis leh oo diyaar u ah 24/7 si aad ugala taliso qof kasta oo ku sugan Pennsylvania dhibaato la soo deristay walwal iyo shucuuro kale dartiis COVID-19, una gudbi agabyada maxalliga ah ee awood u yeelan kara gacan ka geysashada sidii loo haqab tiri lahaa baahiyahooda.
»Kheyraadka kale ee heli kara qof kasta oo Pennsylvania u baahan taageero waxaa ka mid ah:
Xeerarka Ka Hortagga Dhimashada Qaranka: 1-800-273-TALK (8255)
Khadka qoraalka Qalalaasaha: Qoraalka "PA" illaa 741-741
Khadka Tooska ah ee Halyeeyga: 1-800-273-TALK (8255)
Khadka Caawinta Musiibada ee Musiibada: 1-800-985-5990
Hel Khadka Caawinta hadda (Khadka Caawinta) (oo loogu talagalay dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha): 1-800-662-4357
Xuquuqda daabacaadda © 2020 Xarunta Caafimaadka Lancaster | Websaydhka 'Quantum Dynamix'